5050-7000mAh Warshad, Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha 5050-7000mAh Soo-saareyaal
Lithium Polymer batari
Xirmooyinka Baytariga Lithium ion
Batariga loo habeeyay
gawaarida elektarooniga ah
Nooca bateriga Cylindrical
Batariga Nooca Prismatic
Qaab dhismeedka Shirkadda
103450 1800mAh-Maska daboolka
Tayada sare oo loo habeeyay 18650-4s 14.8v 3400mAh Recha ...
Qiimaha Factory UL ansixiyay 22.2v 900mah falanqaynta lee ...
Batroolka smart ee CPAP oo leh soosaar awoodeed oo ku jira recha ...
Iibka kulul 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah lithium ion r ...
Warshadda baytariga toos u iibiso 5000mah 3.7v li-ion 2 ...
Cusboonaysii batteriga Li-po 35R-6000 6000mAh 3.8V Battery Cell oo loogu talagalay Afhayeenka Bluetooth, Alaabta, Robot elektaroonig ah, Telefoonka gacanta, POS, Express Smart Mini Printer
Dib loo soo celin karo batteriga PLM-35R-6000 3.8V 6000mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican ee leh awooda sare ee suurtogalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Waxqabadka Sare Li-po Battery XRF001 6200mAh 7.2V Cell Battery for Laptop, X-ray
Dib loo soo celin karo batteriga PLM-XRF001 7.2V 6200mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican ee leh awooda sare ee suurta gal ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Gaaska dareeraha ah ee Gaaska dareeraya Kali Aasta Batari ERT-06 3.7V 6000mAh Polymer Lithium Batteriga loogu talagalay Soosaaraha Gaaska
Bateriga dib-u-buuxin kara ee PLM-ERT-06 3.7V 6000mAh ayaa isticmaalaya waxyaabaha ugu fiican ee leh awoodda ugu sareysa ee suurtagalka ah macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Gaaska Dheecaanka Gaaska Halis Hal Battery Alarm Battery 103450-3P 3.8V 6000mAh Polymer Lithium Battery for Difaaca Gaaska Iskujira
Dib loo cusbooneysiin karo baytariga PLM-103450-3P 3.8V 6000mAh batteriga wuxuu isticmaalayaa sheyga ugu fiican oo leh awooda ugu sareysa ee ay suurtagal ku tahay macaamiisha caadiga ah. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa codsiyo kala duwan, ganacsigeenu wuxuu daboolayaa inta badan Yurub, Aasiya iyo suuqa Ameerika. Waxaan rajeyneynaa inaan noqono saaxiibkaaga muddada dheer Shiinaha.
Telefoon: + 86-755 36631197
Dabaqa 5, Dhiska 6, Beerta Warshadaha Dongfanghong, Yushi Road, guanlan, Long Hua, 518109 Shenzhen China